(*) Taombaovao Shinoa Messages 2017 [vaovao] (*) Taombaovao Shinoa Messages 2017 [vaovao]
(*) Taombaovao Shinoa Messages 2017 [vaovao]
Taombaovao Shinoa hafatra dia tsy nandeha niala tamin'ny lalana ka nieritreritra ho tonga amin'ny taom-baovao Sinoa 2017 hafatras mifanaraka fotsiny ho anao. Faly hatrany ny fanomezana ho 2017 Taombaovao Shinoa hafatra.
Sambatra Taombaovao Shinoa 2017 Messages
Sambatra Taombaovao Shinoa maniry hafatra
Aoka ho faly ianao afaka mahita ny Taom-baovao eo amin'ny fiainanao indray. Mianara avy amin'ny lasa lesoka ka ento eo amin'ny izao tontolo izao amin'ny avo fanahy!
Taombaovao Shinoa hafatra
Talohan'ny ny fiposahan'ny masoandro ny masoandro voalohany ny 2017, aoka nandoko ny tara Dia fitahiana avy amin'ny fahombiazana sy ny fahasambarana ho anao. Maniry anao eto ny tena tsara New Year!
Taombaovao Shinoa hafatra ho an'ny namana
Io Taom-baovao fa tiako:
Lahatra tsy maka anao ho tsara loatra iny mitaingina;
Cupid mamely ny mamy indrindra zana-tsipìka;
Lady Luck aminareo manome fahasalamana sy harena;
Ny anjely mpiambina mailo foana an-tsainao sy mamirapiratra.
Manana Sambatra ka nitso-drano ny taona vaovao
Oh Ry, Ora manadino ny tahotra,
Aoka rehetra Ora Dreams ho Clear,
Tsy nametraka baomba, Mba Henoy,
Te-hilaza zavatra iray tao Ora sofina
Maniry U tena "Sambatra Taona Vaovao"!
2017 Taombaovao Shinoa hafatra
Ny faniriako ho anao, Lehibe fanombohana for Jan, Ny fitiavana ny Feb, Fiadanana ho an'ny diabe, Tsy misy ahiahy for Aprily, Fun for May, Joy for Jona ho Nov, Fahasambarana for Dec, Manana ny tsara vintana sy mahagaga 2017.
Enga anie ny andro ho toy ny glittery toy ny Diamonds;
Enga anie ny namany ho toy ny tsara toy ny volamena;
Enga anie ny fonareo hijanona ho maitso toy ny Emerald;
Ary enga anie ny fanahinao mitoetra ho madio toy ny Pearl.
Enga anie ny Taona Vaovao hanova ny:
Ny ranomaso ho fifaliana
Ny drafitra ho asa
Ny nofy ho zava-misy
Ny tahiry ho fananana
Ny fitiavana ho Miaraka
Ary ny dingana lehibe ho toerana!
A tena Happy Taona Vaovao
Gong Xai Fa hafatra 2017
Mom & Dada .... Misaotra anao Mitondra Ahy eo amin'ny fiainanao ary tsirambina foana ny fahadisoana & Mbola Fanohanana Ahy na inona na inona ataoko. Tia anao foana. Sambatra ny taona vaovao My Lovely Ray Aman-dreny.
2017 Gong Xi fa Cai hafatra
Voninahitra ho an'Andriamanitra any an-danitra avo indrindra,
Iza amin 'ny olona ny Zanany efa nomena;
Raha anjely mihira amin'ny fitiavana fifaliana,
Ny taom-baovao ho ravoravo ny tany rehetra!
hafatra ho an'ny Taombaovao Shinoa
New Year mitondra fotsiny tsy Sambatra Ravao,
Ny olona rehetra afa-tsy Ianao tia Ry,
Ny olana rehetra dia ho Farano ......
Izany Anao manokana aho Taona Vaovao faniriany.
WhatsApp hafatra ho an'ny Taombaovao Shinoa
Mey rehetra segondra, minitra, ora, andro, herinandro sy volana ity Taona Vaovao hitondra anareo fifaliana be sy ny vintana! Tratry ny taona!
Rehefa miditra avy tamin'ny taon-dasa, ary midira ho amin'ity taona ity, Izaho maniraka anareo avy amin'ny fo feno fitiavana maniry, vintana, fahasambarana sy fifaliana. Tratry ny taona!
Taom-baovao Sinoa 2017 hafatra
Andeha hanao ny Taona Vaovao fanapahan-kevitra ny ho any ho an'ny tsirairay sy manampy mpiara-olombelona izay mila fanampiana isika na dia tsy mahafantatra azy ireo manokana. Koa aoka ho avy ny namelatra ny sasany hatsaram-panahy sy fifaliana!
Funny Taombaovao Shinoa hafatra
Marika iray hafa taom-baovao eto dia recharge ny heriny sy hatao nametraka mankafy. Hanary ny fanahiana, ahiahy sy ny tahotra ary manaraka ny politika fotsiny ny mihomehy, fitiavana, velona.
Taombaovao Shinoa hafatra ho an'ny rahalahy
Enga anie ny taona ho mamirapiratra kokoa noho ny iray lasa; rakotry famindram-po sy miainan'ny; sambatra sy ny fanafiana masina.
Taombaovao Shinoa hafatra ho an'ny fianakaviana
Sambatra Taona Vaovao Veloma any rehetra ny Friends!
Aoka ho tsara fihavanana foana amin'ny mpiara-monina sy ny fianakaviany,
Miady amin'ny fahazaran-dratsy sy ny tsy lavorary,
Ary aoka ny Taom-baovao hahita anareo ho olona tsara kokoa!
Maniry anao ho tena faly New Year!
Zahao hoe: taom-baovao Sinoa 2017 Wishes
taom-baovao Sinoa 2017 hafatra tsara
Maniry anao zava-tsoa rehetra ity Taona Vaovao!
Maka fahafinaretana, fifaliana, fandriampahalemana, fitiavana, care, vintana sy ny fahombiazana mialoha!
mampihomehy Taombaovao Shinoa 2017 hafatra
Enga anie efa lehibe be taona feno fifaliana sy ny vintana! Mijanòna salama tsara sy hanatratra havoana lehibe kokoa ny fahombiazana. Maniry anao tena tsara taona hoavy!
Taombaovao Shinoa hafatra sary
Rehefa mieritreritra momba ny namana sy ny fomba faly dia efa nanao ahy, Te-maniry anao fahasambarana ao amin'ny taona ho avy.
The Taombaovao Shinoa hafatra 2017 dia manatona ela loatra ary isika ho tia ny mahita izay ny ao amin'ny atidoha noho izany Taombaovao Shinoa. Aza dia aoka isika mahalala izay no tsy andrinao ity Taom-baovao Sinoa 2017 hafatra. Gong Xi Fa Cai hafatra 2017 dia vao notsongain'ilay ho anao.